Ogige National Park nke Tayrona, Parque Nacional Natural Tayrona - Santa Marta
South America Colombia Santa Marta
Ogige National Park nke Tayrona
Adreesị: Magdalena, Colombia
Ekwentị: +57 1 3532400
Mpaghara ogige ntụrụndụ: mita 180 square. kilomita
Ụbọchị ntọala: 1969.
Tayrona Park na Colombia dị ihe dị ka kilomita 30 site n'obodo Santa Marta . Ọ bụ otu n'ime ogige ntụrụndụ mba Colombia a kasị mara amara.
Flora na ugbo Tayrona
N'ime akụkụ "ebe ugwu" nke ogige ahụ, e nwere ihe karịrị narị ụdị nnụnụ, ihe karịrị 100 ụdị mammals, ụdị iri anụ 31. Akuku mmiri dị ọgaranya n'ụdị ihe dị ndụ dị iche iche: naanị mpellusks nwere ihe karịrị ụdị 700, yana ihe karịrị narị asaa na narị asaa na iri asaa na iri, ụdị 110 coral na ihe karịrị ụdị sponge 200. Enwere ihe karịrị 400 ụdị azụ n'akụkụ osimiri na osimiri na-asọfe n'ókèala Tayrona.
Ndabere nke ala a bu kwa ọgaranya; N'ala ahụ, ihe dị ka mkpụrụ osisi asaa na narị asaa, na mpaghara mmiri nke ogige ahụ - ihe karịrị ụdị ụdị algae iri atọ.
Na Tyrone ị nwere ike ịnọ maka abalị ma ọ bụ ọbụna na-ebi ụbọchị ole na ole. Ndị nwere afọ ojuju nwere ike ịhọrọ ịnọ na ụlọ ma ọ bụ n'ime obodo; E nwere ebe mgbaba dị ọnụ ala n'ebe a. Ị nwere ike ịgbazite ugbo ala ma nọrọ n'abalị ahụ n'okpuru mbara igwe dịpụrụ adịpụ - ọnọdụ ndị dị na Colombia kwere ka eme ya.
Enwere ụlọ iri ise na ogige:
Tụkwasị na nke ahụ, Tayrona Tented Lodge na Villa Maria Tayrona - ụlọ ahịa Kali na-enwe ụlọ nri ha (nri ụtụtụ gụnyere ego nke ebe obibi ahụ).
Okirikiri ala nke ogige ntụrụndụ a maara nke ọma karịa ka nchekwa ahụ n'onwe ya. Nke mbụ bụ ihe ndị a niile bụ osimiri :
7 ebili mmiri;
Oké osimiri ahụ anwụọla.
Ị nwere ike ịbanye n'ụsọ osimiri n'akụkụ ụgbọ mmiri. E nwekwara osimiri na-adịghị ahụkebe.
Biko rịba ama: a na-eme ka osimiri niile "gọọmentị" gbanwee ma mepee akụrụngwa (mkpịsị osisi, canopies, olulu mmiri, wdg). Egwuregwu n'osimiri "anụ ọhịa" adịghị eso: dịka mita ole na ole si n'ikperé mmiri - iyi mmiri dị egwu; ọ ka mma igwu mmiri n'ebe ndị ọrụ nnapụta dị.
Kedu otu esi aga n'ogige ahụ?
Ị nwere ike ịbanye na National Park nke Tayrona ma site n'obodo Santa Marta na ụgbọ ala na Mingueo-Santa Marta na Av. Troncal Del Caribe; ụzọ ga-ewe ihe dị ka nkeji 40. Tụkwasị na nke ahụ, site na obodo ịkụ azụ nke Tagang ị nwere ike ịbanye n'ogige ahụ site na mmiri, na Taganga si Santa Marta na nkeji iri abụọ (nhọrọ a ga-abụ okpukpu abụọ dị ọnụ ala).
Ọnụ ego nke ileta ogige ahụ bụ 42,000 pesos Colombia, nke dị ihe dị ka $ 13.8.
Obodo furu efu
Ugwu San Cristobal
Museum of Native Art of Pre-Columbian Period
Centre nke Patio Bellavista
Ụlọ Nzukọ Iwu
Caves nke Grutas del Palacio
Ọkpụkpụ aka-Fall 2014-2015
Ichacha akụrụngwa ọgwụgwọ - ihe kachasị mma
Chris Brown na eti Rihanna: "Achọrọ m igbu onwe m"
Lilac ke ndiife ọgwụ
Vinyl akwụkwọ ahụaja
Amica - egosi maka ojiji
Echiche Ndị Rom
Achịcha na cheese na multivark
Charlie Sheen ji egwu Denise Richards
Ọdịdị nke mmepe nke akpanwa
Okwute na-egbu ya
Salad "Pịkụl cone"
Nchikota mmiri ejiji mmiri
Mkpokọta ahụ iji merie ịgba chaa chaa
Na Madrid, wetara Melania Trump a wax na akwa uwe
Waterfalls nke Czech Republic
Kedu ka esi yi bandeeji ntutu?
Esi esi nri geranium n'oge oyi?